Kismaayo News » Farmaajo oo faataxada u maray garoonka Garoowe
Farmaajo oo faataxada u maray garoonka Garoowe
Kn: Xaflad balaaran oo lagu maamuusayay u wanqalka garoonka caalamiga ee Garoowe oo ka dhacday xarunta maamul gobolleedka Puntland ayaa waxaa bineeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Garoonka oo loogu wanqalay taliyihii ugu horeeyay ciidamada booliska Soomaaliyeed Gen. Maxamed Abshir Muuse ayay xarigga ka wadajareen Farmaajo iyo Cabdiwali Gaas.
Dhismaha garoonka waxaa Puntland ka caawiyay dhinaca dhaqaalaha dawladda Kuwayt, halka qandaraaska dhismihiisa ay lahayd shirkad laga leeyahay dalka Turkiga, taasi oo si daacad ah, degdeg ah oon hagrasho ku jirin u dhamaystirtay garoonka.
Dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale maamulka garoonka ku wareejisay qalab casri ah ayadoo la filaayo inay noqoto xarunta 2aad ee laga maamuli doono hawada Soomaaliya marka laga reebo garoonka Muqdisho ee Aadan Cabdille Cismaan.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafti balaaran oo uu hogaaminaayay oo shalay soo gaaray Garoowe ayaa farasmagaalaha meel fagaare ah kula hadlay shacabka, wuxuuna in mudo ah dhex lugeeyay asagoo qaarna gacanta u haatinaaya qaarna gacanqaadaya shacabkii u soo banbaxay inay arkaan madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed.
Garoowe ma aha oo kaliya inay muujisay dhanka horumarka dhismeyaasha kaabeyaasha u ah horumarka bulshada ee sidoo kale waxay muujisay inay tahay meel amaankeedu uu aad uga sareeyo meelo badan oo daafaha caalamka ah.